Soo dejisan CrystalDiskMark 7 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: CrystalDiskMark
CrystalDiskMark – waa software si loo tijaabiyo waxqabadka nuqulada adag. Software wuxuu bixiyaa in uu doorto tirada tirooyinka imtixaanka, xajmiga feylka imtixaanka iyo disk adag ee falanqaynta qiyaasta. CrystalDiskMark waxay qiyaastaa xawaaraha qadarka ah ama rikoodhada ee xogta iyo akhrinta mudo gaaban. Software wuxuu soo bandhigaa natiijooyinka imtixaanka ee daaqada software-ka ee qaabka loo isticmaalo. CrystalDiskMark waxay isticmaashaa khayraadka nidaamka ugu yar oo aan ku rakibin processorka kombiyuutarka.
Qiimaynta akhriska xogta
Meelaynta tirooyinka imtixaanka
Qiimeynta diiwaanka xogta
Soo dejisan CrystalDiskMark
Faallo ku saabsan CrystalDiskMark
CrystalDiskMark Xirfadaha la xiriira